Uwe eji ejiji nke Brazil, gini bu uwe ndi Brazil? | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | America, Brasil, omenala, Ebe njegharị
You maara ihe ahụkarị uwe si Brazil? Tupu ịmara ya, ọ dị mma ịmara na mba dị iche iche bụ ihe okike nke oge a na mgbe ha na-ewu akụkụ dị iche iche nke ndụ na ọdịbendị nke ndị bi na mpaghara ha dị mkpa: asụsụ ma ọ bụ asụsụ, ụkpụrụ ụlọ, omenala na ahụkarị uwe ma ọ bụ uwe, dịka ọmụmaatụ.
Anyị nwere ike ikwu maka obodo na ọtụtụ uwe ndị na-ahụkarị dịka mpaghara, klaasị mmadụ ma ọ bụ agbụrụ dị n'okwu a na ọ bụ obodo nwere ọtụtụ agbụrụ. Iswa bụ ebe dịgasị iche iche na ọtụtụ mba bụ obere ụwa nye onwe ha. Na South America, dịka ọmụmaatụ, e nwere Brazil, ezigbo ibu. Kedu uwe ndị Brazil na-ahụkarị?
2 Uwe ejiji Brazil
Brazil bụ nnukwu mba nke nwere akụkụ dị mma nke ókèala ndịda America na nke elu ya jupụtara na nnukwu akụkụ site na otu n'ime oke ọhịa na-adọrọ adọrọ ma baa ọgaranya n'ụwa, Amazon.
Brasil es ala nke ụmụ amaala ma ọ bụ na narị afọ nke XNUMX ka ndị Europe rutere, Ndị Portuguese. Site na Nkwekọrịta nke Tordesillas, ala ndị ahụ gafere n'Alaeze nke Portugal na ụmụ amaala nde abụọ e mere atụmatụ na Brazil n'oge ahụ, malitere ịchị. E nwere ọtụtụ agbụrụ nke ga - emesị jikọta ndị Portuguese, nke mere na ngwakọta agbụrụ ọhụrụ ga - ebilite na mbata nke ndị ohu ojii si Africa.
Ndị obodo ọ bụla nwere omenala ha, akụkọ ihe mere eme ha, asụsụ ha, na site na mmekọrịta ndị a na-emebu na America, omenala ndị Brazil nke taa ga-amụ, na n'ezie, ndị dị iche iche ahụkarị Brazil uwe na otu onye nwere ike inyocha na mba niile.
Uwe ejiji Brazil
Uwe ndị a na-ahụkarị nwere mgbọrọgwụ na Europe n'ihi na ndị India anaghị aga ije na sket ma ọ bụ ogologo ọkpa. Oge ochichi ebe a nọrọ ihe karịrị afọ 300 ya akara Portuguese na European na uwe n'ozuzu ya siri ike. Themụ amaala nke kpatara ihe ụfọdụ batara na obodo ndị ọchịchị, na ndị isi ojii, ga-agbanwe ojiji na omenala ndị nna ha ukwu Europe mgbe ha na-eji ejiji.
Typicaldị ejiji ndị Brazil na-agbanwe dịka mpaghara obodo ahụ na anyị nwere ike ịme obere nkeji na usoro aka ike nke na-enye ihe nlele nke ụdị a, na-enweghị ike ọgwụgwụ: Salvador de Bahía, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco na Paraíba na Rio Nnukwu Sul. Na nke ikpeazụ anyị nwere uwe ejiji Brazil nke a na-eme ugboro ugboro na mba ndị agbata obi ya dị ka Uruguay na Argentina: uwe onye obodo, panti ya na uwe elu ya.
Ihe panti ahụ abụghị naanị ihe sara mbara, uwe ogologo ọkpa, nke ndị obodo ji eme ihe ma ka na-eme ya, ebe ha nwere ntụsara ahụ ịnya. Na panti agbakwunyere uwe elu, ndị ponchos, Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ na spurs na ahịhịa okpu. A na-ejide uwe ogologo ọkpa ahụ na akwa akpụkpọ anụ ma ọ bụ ajị anụ, ikekwe na ihe ịchọ mma.
N'okwu nke ụdị uwe ndị Brazil nke Pernambuco na Paraíba, steeti abụọ nke Brazil, ha bụ suut mara mma nke a na-ahụkarị n'ememe na ememme ndị nsọ dị nsọ: Uwe ogologo maka ha, na akwa ukwu akara na aka uwe ogologo, jaket turtleneck na akpụkpọ ụkwụ, ọ nwere ike ịbụ uwe nwere mbipụta ifuru na agba, nke na-agbakwunye lace na ruffles na okpu achọ mma.
N'okwu nke ụmụ nwoke ahụ, ha na-eyi ọkpa ahụ dị warara, uwe elu nwere taị (uwe elu nwere ike inwe plaid), ịchafụ, jaket ogologo ikpere nwere bọtịnụ atọ, okpu ahịhịa na akpụkpọ ụkwụ. Ọ bụ na ọ naghị ekpo ọkụ maka ọtụtụ akwa akwa? Ee, mana ka anyị cheta na mmalite ememme ndị a esighi na Amerika mana na Europe na oge a na-aga n'ụzọ na-ezighi ezi.
Otu n'ime uwe ndị kachasị ewu ewu na Brazil nke mmadụ nwere ike ịchọpụta ngwa ngwa bụ nke ndị inyom San Salvador de Bahia, ndị Bahianas. Ha na-ekwu na a syncretistic okpukpe na-akpọ camdomblé ma ha na-eji ejiji nwere uwe mwụda sara mbara nke nwere ogologo oge, uwe mwụda ejiri aka mee na ihe ịchọ mma dị ka olu na nnukwu ọla ntị. N'ezie okpukpe a na-ekwupụta n'akụkụ dị iche iche nke Brazil na uwe nwere ike ịdịgasị iche site n'otu akụkụ gaa n'akụkụ mana nke a bụ isi okwu.
Ọ bụ ụdị uwe maka iji ụbọchị eme ihe maka ememme okpukpe na-ewekarị oke ma wee gbanwee owu dị mfe na nke bara uru maka chintz, lace ma ọ bụ muslin. con otutu ocha, ee, enwere obere agba. A na-agbakwunye eriri dị elu na igbe ahụ nke na-arụ ọrụ dị ka bodice ma ọ bụ bra na ihe okpu, echiche nke ụsọ oké osimiri, nke bụ ihe ọ bụla karịa ákwà ejiri jidesie ike. Onye isi ma ọ bụ nwanyị nke ndị isi kachasị elu n'ime ụlọ nsọ, dị iche na ndị ọzọ n'ihi na ọ na-eyi uwe ma ọ bụ uwe mwụda na akwa na nnukwu ma na-adọrọ adọrọ karị.
Ma gịnị banyere ụdị uwe Rio? Dị? Ee, ma ọ bụ obere. Uwe ejiji nke ndị agba Samba ọ bụ uwe ejiji ndị Brazil? N'uche na a matala ya dị ka uwe ndị Brazil, ọ nwere ike ịbụ. Na ọzọ, ọzọ anthropological, m nwere obi abụọ. Ma nke ọma, na onye na-agba egwú samba nwere obere bikini na-acha odo odo.
Dị ka ọ na-adị na Carnival floats, a na-enyocha ekike ahụ, ndị bikinis a na-adị ndụ jiri okwute, nku na ihe na-egbu maramara. Ọ dịghị ihe mmadụ na-ahụ n'okporo ámá, n'ezie. Ma carnivals na Rio bụ ememme ndị ama ama dịka ememme candomblé na Bahia.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị gafee Amazon Anyị nwere ike ikwu maka uwe ndị ụmụ amaala na-ahụkarị mana anyị ga-eme ụfọdụ ọdịiche dị n'etiti agbụrụ ma ọ ga-abụ ihe siri ike. Ndị mbụ biri na mpaghara Amazon fọrọ nke nta ka ha gba ọtọ ruo mgbe ndị Europe bịarutere na mgbe ha malitere ejiji ha mere nke a na-agbaso ụkpụrụ nkasi obi ọ bụghị ejiji nke ndị Europe.
E nwere ụwa dum nke ihe ịchọ mma, ọla aka, bangles, ihe maka ntutu isi, nke na-amata otu agbụrụ site na nke ọzọ, na kwa n'ememe okpukpe ka a na-ahụ ha ekike ụfọdụ ejiri si na alaka, osisi osisi, ma ọ bụ eriri eke na-enweta agba na akwukwo nri inks. N'ịbụ ndị a na-eme ka ha dị irè, ọtụtụ n'ime uwe ndị a na-ahụkarị na-ekpuchi akụkụ ahụ mmadụ na akụkụ ndị kachasị mfe nke ahụ mmadụ.
N'ezie ọ bụghị naanị uwe ndị a na-ahụkarị na Brazil. Ọ bụrụ na ịhụghị ịma mma ịma mma iji hụ onye bụ nwanyị kachasị mma na Brazil, ị ga-amata na mba ahụ buru ibu ma na ọ bụrụ na ị na-eyi uwe ndị a na-ahụkarị, enwere ọtụtụ ndị ọzọ. Mana dị ka ihe atụ, bọtịnụ bara uru na ndepụta a bụ nke anyị.
Kedu uwe ndị Brazil ị na-eyi?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Brasil » Uwe ejiji nke Brazil